‘कानून निर्माणमा जुट्दा पूँजीगत खर्च कम’ | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर ‘कानून निर्माणमा जुट्दा पूँजीगत खर्च कम’
on: १ जेष्ठ २०७६, बुधबार ०६:१२ मुख्य खबर, समाचार
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा कानून निर्माणमा सरकारले समय खर्चिंदा पूँजीगत खर्च कम भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले यस वर्ष पूँजीगत खर्च राम्रो नभए पनि आगामी वर्ष उत्साहजनक हुने दाबी गरे । ‘हामीले चाहेको गतिमा १२ महीनाको नियमित चक्रमा पूँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘यो आर्थिक वर्षमा हामीले यो कारणले गर्न पाएनौं भन्ने छूट छ । किनभने हामी कानून निर्माणमा लाग्यौं ।’ गत फागुनसम्म कानून निर्माण गर्दैमा बितेको मन्त्री डा. खतिवडाको भनाइ थियो ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा खर्च, राजस्वका अधिकार, आर्थिक कार्यविधि र कर्मचारीको तयारीजस्ता विषयमा अल्झिनु परेकाले पूँजीगत खर्च चाहेजसरी गर्न नसकिएको उनले बताए । अझै पनि सार्वजनिक खरीद ऐन र निर्णय प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए ।
‘खरीद ऐन तथा सांगठनिक र निर्णय प्रक्रियामा देखिएका समस्याहरू संसद् मार्फत संशोधन गर्दै छिटो कार्यान्वयन हुने तहमा जानेगरी अगाडि बढ्छौं,’ खतिवडाले भने । यसपटकको बजेटमा क्षेत्रगत प्राथमिकता नतोकिएको उनले बताए ।
‘क्षेत्रगत प्राथमिकता खोज्दा मान्छेको अनुहार हराउने रहेछ,’ मन्त्री खतिवडाले भने, ‘सबै नेपालीको अनुहार उज्यालो हुने विषय सरकारको प्राथमिकता हो ।’
उनले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नुभन्दा अरू विकाससँगै लैजानुपर्ने बताए । कृषिको विकासका लागि सँगै सडक बनाउनुपर्ने, कृषि सूचनाका लागि प्रविधि निर्माण गर्नुपर्ने, उत्पादन बढाउनुपर्ने विषय आउने उनको तर्क छ ।
दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै सरकारले सन्तुलित बजेट ल्याउने उनको दाबी छ । द्वन्द्व नबढाउने, शान्ति प्रक्रियालाई बलियो बनाउने, असमानता घटाउने, पूँजीले श्रमको शोषण नगर्ने र भएको आर्थिक वृद्धिको समन्यायिक वितरणलाई नै बजेटले आत्मसात गर्ने उनको जिकीर थियो ।
खास वर्ग र क्षेत्रबाट निर्देशित आर्थिक वृद्धि अर्थात् वित्तीय र प्रविधिमा आधारित पूँजीवादले श्रमको शोषण गर्ने भएकाले दिगो नहुने दाबीसमेत मन्त्री खतिवडाले गरे ।
वर्ष २०७५ : कानून निर्माणमा सफल, कार्यान्वयनमा चुनौती
२९ चैत्र २०७५, शुक्रबार ०९:२५